Wayo n'ekwú, Wayo n'ekwú Device, Vetikal Wayo n'ekwú - Juda
Linyi Juda sayensị na teknụzụ nchedo gburugburu injinia co., Ltd. a factory na ihe karịrị 30 afọ 'akụkọ ihe mere eme, tumadi aku na gburugburu ebe obibi-echebe vetikal wayo n'ekwú ọkụ, n'ekwú ọkụ na-akwado akụrụngwa, gburugburu ebe obibi-echebe ájá mwepụ akụrụngwa na akpaka akara usoro, wdg anyị ụlọ ọrụ meriwo ntụkwasị obi nke ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa site zuru okè imewe usoro, magburu onwe isi ngwaahịa, ike na-ewu na n'ichepụta ikike, a pụrụ ịdabere na injinịa àgwà, elu larịị nke ọrụ na ezi arụmọrụ.
Ngwa nke wayo ngwa ngwa
A na-emepụta ngwa ngwa site na limestone nwere ngwakọta nke calcium na magnesium carbonates. A na-emepụta calcium ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na dolomitic ngwa ngwa site na kpo oku a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ikpo ọkụ ruo ogo 900 degrees. A na-ezo aka na usoro a dị ka usoro ịkụzi usoro. T ...
Nkọwapụta Ngwaahịa lime vetikal na-ezo aka na wayo calcining ngwaọrụ maka ịwụnye clinker na-aga n'ihu na akụkụ ala nke nri elu. Ọ nwere ahụ ọkụ, na-agbakwunye ma na-ewepu ngwaọrụ yana akụrụngwa ikuku. vetikal wayo n'ekwú ọkụ nwere ike kere f ...
Igwe a na-etinye wayo nke a na-ezo aka na lime calcining maka ịwụnye clinker na-aga n'ihu na akụkụ ala nke nri elu. Ọ nwere ahụ ọkụ, na-agbakwunye ma na-ewepu ngwaọrụ yana akụrụngwa ikuku. vetikal wayo n'ekwú ọkụ nwere ike kere n'ime anọ ndị a na ụdị ...
1) Okwute limestone ahụ buru oke ibu: usoro ịgba ume nke limestone na-adabere na okpomọkụ nke nha nke kọntaktị lime na elu nke nzu. N'ebe okpomọkụ ụfọdụ, ogo nke limestone na-adabere na nha nke limestone ahụ.
Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium Hydroxide Ime, Calcium hydroxide nhazi akụrụngwa, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Ime Calcium hydroxide, Calcium oxide Liquid,